トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Ngebuhle nebubi kuhloswe imodeli billboard wamakhaza pachinko
Ibhodi onobuhle, ngifuna ukudlala amakhasimende kakhulu wamakhaza pachinko, 's umkhiqizo efakiwe. Ibhodi onobuhle, kodwa ehlukene nge esitolo ngamunye, ngokuvamile kukhona onobuhle eziningi uchungechunge osekukade ethandwa. Ekhuluma kungani, uchungechunge ethandwa uyaphuma Xintai kusukela eduze esilandelayo. Imodeli yochungechunge efanayo, uma Tsukaere kakhulu njengesibonelo mhlobiso, lokhu esitolo nale modeli kungenzeka ukwakha oqinile nesithombe.
Ngakho, ngingathanda sibheke emihle nemibi ukuthi hit njalo onobuhle uphawu kunoma iyiphi eshintsha pachinko.
njengoba izinzuzo, kuba ukuthi uzinzile nhlobo. Ikakhulukazi nail ukulungiswa kanye Horukon kulungiselelwa, Ngicabanga ukuthi iphuzu mkhulu okungukuthi okuzinzile. Ibhodi onobuhle, ngoba kuyisibonakaliso yokudala emgwaqweni esitolo isithombe negama layo, uyisibonelo wukuthi ngeke kalula noma lonke ithebula umshini yokutakula. Ikakhulukazi, uma Ezivamile ziningi ukungena ngemvume onobuhle, ukuthambekela okunjalo liyoba namandla.
nail ukulungiswa Kungenzeka ukuthi uqinile, kusukela ijubane ukujikeleza ka, isibonelo ayizinkulungwane yen esitebeleni njalo, kalula ziphawulwe elithile utshalomali, ukuthi ukulwa idatha ngamakhasimende kungaba. Isilinganiso emhlabeni, futhi kuzo okusezingeni eliphezulu billboard onobuhle nsuku zonke, babe Kuhlangana okusheshayo ngayinye, kulapho hit ngokwemvelo ngokwesilinganiso. Idatha ngaphezulu, ngakho lungasetshenziswa njengendlela material ukuzimisela ukufunda igagasi Horukon kanye ROM lokulwa kuyoba khona yizikhukhula.
Ngaphezu kwalokho, kusukela models billboard ngokuvamile pachinko emakhazeni ukuthi ufake ngaphezulu inombolo, ukuthi ukulungiswa nail lonke etafuleni nsuku zonke, kuyoba ngesikhathi engenakwenzeka. Uma kuka Horukon iqoqo Hanemono ukulungisa ibhola out nge ukulungiswa nail, inombolo yelicala njengoba izitolo ezinkulu likhulu, lapho njengoba omunye amasu ukuthi inhloso elihlehlisiwe.
kusimo okungukuthi, ukukhuluma ngalokho-ke, ngempela ukungena ngemvume onobuhle, inyuka njalo, ukuthi indlela yokuphepha kwendawo yesikhulumi kunzima. Ezivamile, nithatha vakashela okuhloswe ngaso imodeli nebhodi lokukhangisa esitolo. Wonke umuntu, kwaba emehlweni ukuthi wamshaya zanqwabelana ivame ukungena ngemvume onobuhle Ngicabanga kukhona.
salokho, pachinko esitolo Ezivamile abakanye eziningi, ilungiselelo pre-ukuvulwa muhle, ngena ngemvume kuphela imodeli kusukela ekuseni abe isimo kuzo okusezingeni eliphezulu. Wave ithebula ezinhle billboard ngayinye imodeli ukuthi musa ukuhlala phansi ukuya kwelinye ekuseni. Sazama ukwandisa izinzuzo nemibi imodeli billboard, ngcono izinzuzo, ngokwesilinganiso, ngokuvamile, uzongena ngemvume imodeli. Uma ulahlekelwe imodeli abakhethiwe, kungase kube ukuhlakanipha kangakanani zama hit a imodeli ebhodini lesikhangiso.